Xiaomi Mi Band 4: Izay fantatsika rehetra hatreto | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Band 4 dia taranaka fahefatra amin'ny fehin-tànana marika sinoa. Ny fandefasana azy dia kasaina amin'ity taona ity, satria efa nanamafy izy ireo avy amin'ny orinasa mihitsy. Nandritra ny herinandro maro dia nanomboka nahafantatra antsipirihany momba ity bracelet an'ny marika sinoa ity isika, tamin'ny alàlan'ny famoahana isan-karazany. Isaky ny mahazo angona bebe kokoa momba izany isika, noho izany dia tsara ny manangona izay fantatsika rehetra hatreto.
Taorian'ny fahombiazan'ny taranaka teo aloha, inona no namidy tena tsara iraisam-pirenena na in tsena toa an'i IndiaTsy mahagaga raha efa miasa ity orinasa ity Xiaomi Mi Band 4. Taranaka vaovao izay mampanantena fa ho tonga miaraka amina fanovana isan-karazany, araka ny efa navoakan'izy ireo hatreto.
3 Daty mamoaka
Ny fiovana voalohany hitantsika ao amin'ny fehin-tànana dia ny endrika. Amin'ity tranga ity, ny marika sinoa dia mandefa efijery lehibe kokoa eo amboniny, izay amin'ity tranga ity dia 0,95 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana 240 x 120 teboka. Ho fanampin'izay, dia ho efijery fikitika izy ary hahatratra ny hafa amin'ny loko, toy ny hita tamin'ny famoahana maromaro. Hampiasa tabilao AMOLED amin'ity orinasa ity ny orinasa.
Tamin'ny taon-dasa dia efa navelany tamin'ny efijery lehibe kokoa izahay, ka toa tsy ampy ho azy ireo izany. Na dia mahay mandanjalanja aza dia hanamora kokoa ny fampiasana an'ity Xiaomi Mi Band 4 ity amin'ny toe-javatra isan-karazany. Sombiny iray manan-danja tokoa amin'ity lafiny ity amin'ny marika sinoa.
Mikasika izany dia efa betsaka ny tsaho hatreto. Nambara fa ny taranaka vaovaon'ilay bracelet dia ho avy amin'ny Bluetooth 5.0. Inona koa, antenaina fa hisy ny kinova aminy miaraka amin'ny NFC, toy ny nitranga tamin'ny taon-dasa, na dia mbola tsy navoaka tao Espana ity kinova ity. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hanombohana na tsia ity Xiaomi Mi Band 4 vaovao miaraka amin'ny NFC any Espana ity.
Mipoitra indray ny sensor ny tahan'ny fo ao anatiny, miaraka amina andiam-panatsarana, natao ho marina kokoa amin'ity taranaka ity. Tsy fantatsika hatreto izay fanatsarana nampidirina tao, hanatsarana ny fiasa voalaza. Fa io dia iray amin'ireo asan'ny kintana amin'ny fehin-tànana.
Ankoatr'izay dia fantatra fa ity Xiaomi Mi Band 4 vaovao ity dia hanohana ny baikon'ny feo. Angamba, ny kinovan'ny kinanina amin'ny brasele dia hampiasa ny mpanampy ny marika, antsoina hoe Xiao AI. Na dia eo amin'ny kinova iraisampirenena aza dia azo inoana fa ampiasaina ny Google Assistant, mba hifanaraka amin'ny fiteny maro samihafa amin'ny fotoana iray. Tsy misy fanamafisana aloha momba ny fampiasan'ireo mpanampy amin'ny fehin-tànana.
Tsy mbola misy antsipiriany momba ny batterie an'ny fehin-tànana hatreto. Na dia misy aza ny tsaho vaovao milaza fa ho entina miaraka amin'ny entana any ivelany izy io. Izy io dia karazana enta-mavesatra mamela antsika tsy hanaisotra ilay fitaovana amin'ny fehy hahafahana mampandoa azy. Amin'ity tranga ity, ny famandrihana azy dia hatao amin'ny adaptatera. Ity dia zavatra mbola tsy voamarina hatreto.
Iray amin'ireo fisalasalana lehibe ihany hatreto. Xiaomi dia nilaza fotsiny hatreto fa ny fehin-tanana dia hatsangana amin'ny taona 2019, na dia tsy nanome daty nandritra ny taona aza izy ireo. Ny modely tamin'ny taona lasa dia tonga teny an-tsena tamin'ny volana Jona, ka azo inoana fa amin'ity volana ity isika dia hanana vaovao. Satria mahazatra ny marika ny mandefa ny vokariny amin'ny daty mitovy amin'izany.
Saingy tsy maintsy miandry andro vitsivitsy isika mandra-pahatongan'ny andao hahalala bebe kokoa momba ny fahatongavan'ity Xiaomi Mi Band 4 teny an-tsena ity, izay tsy isalasalana fa manana ny zava-drehetra hahomby amin'ny marika Sinoa. Raha mahita ny varotra tsara amin'ny taranaka fahatelo dia tsy mahagaga raha hitombo amin'ity taona ity ity bracelet vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi Band 4: Ny zavatra fantatsika hatreto
Mirongatra ny varotra Samsung any Espana